Mgbanwe Dynamic: AI-Powered Omnichannel Personalization Technology | Martech Zone
Dynamic MmụbaIgwe ihe omumu nke igwe di elu na-ewuli akuko ndi ahia na oge, na enyere ndi ahia aka ime ka ego ha na enweta site na ngbanye onwe ha, ntuziaka, njikarịcha akpaka na izipu 1: 1 Ndị ụlọ ọrụ ndị kachasị nke ọma na-ahụ njikọ aka ndị ahịa na-arịwanye elu, ego ha na-enweta na ntanetị, na ROI dị elu. Mana ụlọ ọrụ na-eme ka ndị mmadụ ghara ịdị na-eme eme. Ọ na-ewe ịzụta, nhọrọ ndị na-ere, ịbanye na ntinye nke ọma.
Fọdụ ụlọ ọrụ na-atụle keonwe ke akpa ini. Arefọdụ na-ebuga dị mfe email nkeonwe. Fọdụ chọrọ ịkwaga n'ọkaibe nkewa azum. Companieslọ ọrụ ndị kachasị elu na-ebute nhazi nke onwe ha karịa karịa ụzọ aghụghọ, mana dị ka isi ihe iji nyefee ahụmịhe ndị ahịa ka elu.
Onyinye Dynamic na-enye ohere nke nhazi onwe na njikọ aka:
Nhazi nke Omnichannel - Meziwanye Ahụmịhe Ndị Ahịa nwere Nhazi Oge
Mgbasa Ozi Mgbasa Ozi - Meziwanye Azụmaahịa ROI site na Mgbasa Ozi Mgbasa Ozi
Behavioral Izi ozi - Kpọtụrụ Ozi Dị Ezigbo Mkpa na Oge
Ọrụ data ndị ahịa na nkewa - Gbanwee data nke ndị na-ege gị ntị n’ime ngalaba ọrụ onye ọrụ
Ntuziaka nkeonwe - Mekwuo Onwe Gị Site na Ọdịnaya Gị na Aro
Nhazi nke Email - Gbanye nsonaazụ ndị ọzọ site na Mgbasa Ozi Email
Dynamic A / B Ule - Nnwale Ule Nleba Azụmaahịa na Ike Ike
Nhazi nke Ngwa Ngwa - Obere ihuenyo, Otu 1: 1 Ntị
Inye akuko di omimi banyere ala nke ntozu oke nke mmadu n'ahịa, anyị nyochara ndị ahịa 700 zuru ụwa ọnụ na ndị isi na ụlọ ọrụ niile. Lee nsonaazụ ndị a.
Tags: ule uleagbahapụ ịzụ ahịaaiAi-chụpụrụ aroAmamịghe echicheakpaghị aka uleizi ozi gbasara omumeagbahapụ agbahapụike ab uleemail nkeonweMgbasa ozi ahia nke onweahaziri ngwa nke ekwentịnhazi onwe nke multichannelnhazi ihe omnikeonweahaziri mmaduna-emegharị ahụịzụ ahịa ịzụ ahịa